yaseYurophu Blackjack |
Ukuba ukhangela umdlalo okuphumelela tye kunye neempawu ezilula kodwa eziyinyani kunye nemizobo, yaseYurophu Blackjack nguye engcono kuwe. Kule Free Bonus okuphumelela Site, uyakwazi ukudlala ngamanani ukusuka 1 ukuze 36 kunye a zero eyodwa. Amanani abantu ngokungenamkhethe uphawu amabala alternate ezimnyama kwivili okuphumelela. Le mifanekiso 3D yalo mdlalo inikeza ngamava neqiniso kubekho-up imbono lwevili. Ngoko ungabona ngokucacileyo ibhola kaloliwe nalapho izisa. Kukho weembaleki ukubheja ukhetho kule uhlobo kakhulu. Imida ukubheja kule game siqale ubuncinane £ 0,20 ukuya kutsho kuma-£ 100 kwisikhundla ngasinye.
Malunga umbhekisi phambili European okuphumelela
Le yenzelwe ngendlea Free Bonus okuphumelela Site umdlalo wadalwa NetEnt. Enye developers inkulu ehlabathini namakhulukhulu imidlalo ezivela iindidi ezahlukeneyo casino ezifana Azisekho, itheyibhile nemidlalo kumthengisi live.
Kule alula Free Bonus okuphumelela Site umdlalo, ungabeka ukubheja kwakho kumanani ezahlukeneyo kuquka ukubheja ngaphandle. Indawo apho unokoyisa umvuzo liphakamileyo ngqo elilodwa 35 amaxesha imali ukubheja kwakho iyonke. Kukho ezine kubhejwa ezahlukeneyo ngaphakathi kakhulu ukuba unokoyisa ukusuka. Uhlulo iqulathe amanani ezimbini ezahlukeneyo iyifake 17 ukuya kwenye xa iibhola kulo naliphi na zibini. Ngokufanayo, esitratweni uye amanani ezithathu kumhlathi behlawulwa of 11 ukuya kwenye. Corner iqulathe amanani amane iyifake 8 ukuya kwenye. ekugqibeleni, umgca eye amanani amathandathu byi 5 ukuba omnye ukubheja kwakho uwonke.
Olona phawu intle le slot kukuba idlalwe kwiindawo zokubeka online akukho mobile ngotyalo olunye, iimpawu ebhonasi izakufunyanwa xa uya umhlaba iisimboli agcwayele iplanethi ezintathu okanye ngaphezulu naphi na kwi reel. Ukuba uya kuphumelela ekwenzeni le, ke uya kunikwa ezilishumi Posh ijikelezisa free. Wonke bathole kwenziwa ngethuba le ngeenxa zonke ziya liphindaphindwe 2x kwaye ukuba lasendle lingaba inxaxheba ke iya phinda ngo '4x. Ukuba unethamsanqa elaneleyo kwaye ukwazi ngakumbi kumhlaba Uchithachitha abathathu, ke uya kunikhulula kwakhona ivule ijikelezisa.
yeMali ngaphandle: Kukho iintlobo ezintlanu ezahlukeneyo yokubheja ngaphandle ukuba unokoyisa ukusuka. Red-black, yomphakamo nesezantsi, uyinqaba-nkqu, nekholam elinesibini ezi zikhundla. Ezi Ukubhatalwa balapha 1 ukuze 1 ngaphandle nekholam kweshumi nge 2 ukuze 1. Amathuba kula ukubheja kuyinto ngaphezu kubhejwa ngaphakathi kwaye kungoko igcina kuwe kwindlela lokuwina.
game Iziphumo: le Free Bonus okuphumelela Site Umdlalo ubonisa iziphumo imidlalo ezilishumi lokugqibela kwi main screen. Kukho kwakhona iqhosha imbali ebonisa ukuba iziphumo zokugqibela 100 imidlalo. Ezi zibalo kukunceda ukudlala-qhinga esebenzayo ngakumbi imidlalo elizayo zakho.
Kunye nemizobo 3D engqondweni-bevuthela kunye neempawu umdla ukukunceda uphumelele lula, le Free Bonus okuphumelela Site umdlalo has siphantsi indlu ngohlangothi 2.7%.